Raisulwasaaraha Dawlada Federaalka Soomaaliya oo soo kormeeray Xarunta Wasaaradda Gaashaandhiga “Sawirro” | Sagal Radio Services
Raisuwasaraha ayaa soo kormeeray dhamaan qaybaha kala duwan ee wasaaradda Gaashaandhiga isagoo warbixino halkaasi kala dhageystey Masuliyiinta iyo taliyayaasha Qaybaha ee Wasaaradaasi .
Raisulwasdarha dawlada Dr, Cabdi Wali Sheikh Axmed ayaa ugu horeyn waxa uu Salan sharaf ka qaatey Ciidanka Qalabka sida salam ka dib ,Raisulwasaraha ayaa kulamo la qaatey Masuliyiinta Wasaaradaasi aya kala hadlay in isbedel lagu sameyn doono dhamaan hawlaha wasaaradda lana dardar galin doono , isagoo xusay in ciidanka xooga dalka dadaalka ay ugu jiraan ka sifeyn Maleeshuiyada Al-sdhabaab goobaha fara ku tiriska ay haatan ku sugan yihiin.
Raisulwasaarada waxaa kaloo u sheegay in qorshaha sannadka cusub 2014 Ciidanka Xooga Dalka Soomaaliyeed ay heli doonaan xaquyuqdooda oo dhameystiran ,sidoo kale waxa uu sheegay in ciidanku helli doonaan Tababaro joogto ah wadanka gudahiisa iyo dibadiisa.
Dr,Cabdi Wali sheikh Axmed raisulwasaaraha Somaaliya tan iyo markii ay cod buuxa ku ansiyeen Baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa uu kormeer shaqo horey ugu tagey Dugsiga Waxbarasha macallin Jaamac iyo Dekaddamagaalada Muqdishu.
Kormeerka Raisulwasaaraha ayaa waxa ku wehliey sii haya xafiiska wasiirka Gaashaandhiga cabdi xakiin nuur fiqi ,Masuuliyiin ka tirsan dawlada iyo taliyashaasha Qaybaha Ciidanka qabka sida
Tags booqashadii cabdiwali